पत्रपत्रिका Archives - jagritikhabar.com
३० जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद मोहन बानियाँले नेपालमा ५ हजार अमेरिकी सेना गुप्त रुपमा बसेको जिकिर गरेका छन् । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद बानियाँले भने, ‘नेपालमा कति छन् अमेरिकी सेना थाहा छ रु यहाँ ५ हजार अमेरिकी सेना...
२८ जेठ, काठमाडौं । भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण आसपास केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार आज बिहान २ बजेर ३६ मिनेट जाँदा भक्तपुरको चाँगुनारायण आसपास केन्द्रबिन्दु भएर ४.७ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । उक्त भूकम्प गोरखा भूकम्पको परकम्प...
अब बैंकबाट यसरि पाउनुहोस् बिना धितो १५ लाखसम्म ऋण, लिने तरिका यस्तो छ !
२१ जेठ, काठमाडौं । बैंकबाट पाउनुहोस् बिना धितो १५ लाखसम्म ऋणकाठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले पेशागत कर्जा सार्वजनिक गरेको छ । सपनालाई एउटा नयाँ उडानः पेशागत कर्जा, बिना धितो नारासहित बैंकले उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न...
१८ जेठ, काठमाडौं । पोखरा–जोमसोम रुटमा उडान भर्ने तारा यएरको सात वर्षको अवधिमा यो दोस्रो दुर्घटना हो । चालक दलका सदस्यहरुसहित २२ जना यात्रु बोकेर जोमसोमका लागि उडेको तारा यएरको ९ एमएईटी ट्वीनअटर विमान आइतबार मुस्ताङको लेते क्षेत्रमा दु र्घ ट ना ग्रस्त भएको...
१५ जेठ, काठमाडौं । शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछ । स्रोतका अनुसार यसपटको बजेट आसन्न संघीय चुनावलाई केन्द्रीत गरेर ल्याइएको हो । आज अपराह्न चार बजे बस्ने संघीय संसदको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आय–व्ययको विवरण प्रस्तुत...
काठमाडौं । महानगरको मेयरमा बालेन्द्र साह बालेन निर्वाचित भए संगै काठमाण्डौले नयाँ मेयर प्राप्त गरेको हो । ईतिहास रच्दै बालेन स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा काठमाण्डौको मेयर बन्न सफल भएका हुन् । उनी ६१ हजार ७६७ मत ल्याउँदै काठमाडौं महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएका हुन् । उनको...
९ जेठ, काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकामा पछिल्लो मत परिणामअनुसार सत्ता गठबन्धनको मेयरकी साझा उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालले ९,८३४ मतले अग्रता कायम गरेकी छन् । एक लाख १ हजार ९४५ मतगणना सकिँदा रेनुले ४३,२३७ मत प्राप्त गरेकी छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका...
८ जेठ, काठमाडौं । भरतपुर महानगरमा मेयर पदकी उम्मेदवार रेनु दाहालले अग्रता कायम राखेकी छन् । ८३ हजार १११ मत गन्दा उनको अग्रता ६ हजार ९३९ रहेको छ । पछिल्लो मत परिणाम अनुसार उनले ३२ हजार ५११ मत प्राप्त गरेकी छन् । मेयर रेनु...
भरतपुर महानगरमा रेणु दाहाल भारी मतले बिजयी, एमाले भयो पत्तासाफ !
६ जेष्ठ, काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकामा ५५ हजार ६८० मतको गणना सकिएको छ । भरतपुरमा एक लाख २७ हजार ८३९ मत खसेको थियो ।महानगरको वडा नं १ देखि १० सम्मको मतगणना सकिँदा ४६ हजार १२३ मतगणना सम्पन्न भएको छ । अहिले भरतपुरका वडा नं...
भरतपुर महानगरमा रेणु दाहालले कति मतले बिजयी भने कुरा पक्का भयो !
६ जेष्ठ, काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल विजयी हुने पक्का छ । निर्वाचन भएका ५ वटा महानगरमध्ये मेयर र उपमेयर दुबै पदमा महिला निर्वाचित भएको भरतपुर महानगरपालिका मात्रै हो । भरतपुर महानगरमा मेयर उम्मेदवार रेनु दाहालले मतान्तर फराकिलो बनाउँदै गएकी...
123 … 32 पछिल्ला »